ငိုလှနျးလို့ဆိုပွီး ကလေးထိနျးကရိုကျနှကျမှုကွောငျ့ မသမရှေငျနဲ့ ဒုက်ခိတဖွဈခဲ့ရတဲ့ (၁)နှဈသမီးငယျ
15/11/2019 Thu Yay 0
ရိုကျနှကျခံထားရတဲ့ ဒဏျရာတှအေမြားကွီးနဲ့ တဈနှဈအရှယျ သမီးငယျလေးဟာ မိဘတှနေဲ့အတူ ဆေးရုံကို အပွေးလာခဲ့ရပွီး အသကျရှငျအောငျအရေးပျေါ ဆေးကုသခဲ့ရတဲ့ ဖွဈစဉျတဈခု ထိုငျဝမျနိုငျငံ၊ တိုငျခြှနျးမွို့မှာ ဖွဈပှားခဲ့တယျလို့ Sin Chew Daily သတငျးဌာနက ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ ကလေးရဲ့ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးမှာ ညိုမဲစှဲနတေဲ့ ဒဏျရာနဲ့အတူ ကြိုးနတေဲ့လကျမောငျးကွောငျ့ အရေးပျေါလူနာအဖွဈသတျမှတျခဲ့ကာ အသကျကယျခဲ့ပါတယျ။ Continuous reading
အသက်(၂၀)အရွာ်ကျာင်းသားလေး ပါတီမှာအရက်အသောက်လွန်ပြီးသေခဲ့တဲ့အပေါ် သူငယ်ချင်း (၉)ယောက်ကိုတရားစွဲ
အသက်(၂၀)အရွာ်ကျာင်းသားလေး ပါတီမှာအရက်အသောက်လွန်ပြီးသေခဲ့တဲ့အပေါ် သူငယ်ချင်း (၉)ယောက်ကိုတရားစွဲ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုဆာကာတက္ကသိုလ်က ကင်ဒိုင်တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်နေတဲ့ အသက်(၂၀)အရွယ် ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ စုပြီးပါတီမှာ အရက်သောက်ခဲ့ချိန် အရက်သောက်လွန်ပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက် သူငယ်ချင်း (၉)ယောက်ကို လူသေစေမှုနဲ့တရားစွဲလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒုတိယနှစ်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်ဟာ ပါတီမှာအရက်သောက်ဖို့အတွက် အတူတူသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ပါတီရောက်ချိန်မှာ Continuous reading
ကွမ်းစားတဲ့ သူတွေ ကျောက်ကပ် ရောဂါမဖြစ်အောင် မုန်လာဥဖြူ နဲ့ ကျောက်ကပ်ဆေးတဲ့ နည်းလမ်းလေး ကွမ်းစားခြင်းဟာ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ တော်တော်များများက စားသုံးကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း ဟိုးရှေးယခင်တွေကတည်းက ကွမ်းစားခြင်းဟာ ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဧည့်သည်လာရင် ကွမ်းနဲ့ဧည့်ခံခြင်းဟာလည်း ထုံးတမ်းအစဉ်အလာဆိုရင် မမှားပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း အာရှအပြင် ဥရောပနဲ့ အနောက်အမေရိကတွေမှာပါ Continuous reading
လူတဈသောငျးကြျောလကျဝှပှေဲ့အလကားကွညျ့လို့ရအောငျ ယူကြူ့ကိုတဈပတျရိုကျပွခဲ့တဲ့ အမြိုးသား
ပှဲကွီးပှဲကောငျးတဈပှဲအဖွဈ ပွနျပွီးထိုးသတျလို့ရအောငျ ကအေကျဈအိုငျနဲ့ လိုဂနျပေါလျတို့ရဲ့ ပှဲကို တာဝနျရှိသူတှကေ စီစဉျပေးခဲ့ပါတယျ။ ပှဲကောငျးဖွဈတာနဲ့အညီလကျမှတျကလညျး မရောတာ့သလို မှောငျခိုကလညျး ဈေးကွီးတဲ့အတှကျ ပရိသတျတှဟော လကျဝှပှေဲ့ပွမယျ့လိုငျးကို ယူကြူ့မှာရှာခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ယူကြူ့ကလညျး ပိုကျဆံနဲ့အခကွေးငှယေူပွီး ပွသတဲ့ ခနျြနယျတှရှေိနတေဲ့အတှကျ ပိုကျဆံမပေးတဲ့သူတှကွေညျ့မရအောငျ ပွနျပွီးနညျးမြိုးစုံနဲ့တငျတဲ့သူတှကေို ကွညျ့မရအောငျဖွုတျခနြခေဲ့ပါတယျ။ လကျဝှပှေဲ့ကိုကွညျ့ခငျြတဲ့ ပရိသတျတှဟော ရှာရငျးရှာရငျးနဲ့နောကျဆုံးမှာ Continuous reading
ကိုယ် ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုလေးကိုပဲ တကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ တွေ့နေပြီဆိုရင်… ကိုယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုလေးကိုပဲ တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့သူနဲ့ တွေ့ပြီးပြီလား။ တကယ်လို့များ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အဲ့လိုလူနဲ့တွေ့ဆုံရတယ်ဆိုခဲ့ရင်… (၁) တစ်ချိန်ချိန်မှာ သူ့စိတ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ သိထားပါ …. ။ လူ့စိတ်ဆိုတာ အစိုးမရဘူးမဟုတ်လား။ ကိုယ့်ကို အခုနေချစ်နေပေမယ့်၊ နောက်တစ်နှစ်လောက်နေရင် ချစ်ချင်မှချစ်နေတော့မှာ။ အဲ့ဒီတော့။ သိပ်ပြီး ပျော်မနေပါနဲ့။ Continuous reading
အချစ်က ထမင်းမကျွေးဘူး ဆိုတဲ့ (၂၁) ရာစုမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟဝင်ခံချက် (သိပ်ကို ကောင်းလွန်းတဲ့ စာလေးပါ)။
အချစ်က ထမင်းမကျွေးဘူး ဆိုတဲ့ (၂၁) ရာစုမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟဝင်ခံချက် (သိပ်ကို ကောင်းလွန်းတဲ့ စာလေးပါ)။ ကျမချစ်သူကို ပြောခဲ့ဖူးတယ် ။ နောက် ၂နှစ်လောက်နေရင် ငါလက်ထပ်ဖြစ်လိမ့်မယ် ။ဒါပေမယ့် ငါလက်ထပ်တဲ့သူက နင်ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်လိမ့် မယ် … ။ နောက် ၂နှစ်လောက်နေရင် အဆင်ပြေတဲ့သူကို Continuous reading
လှိုင်သာယာတွင် ၁ဝနှစ် အရွယ် ကောင်မလေးကို ( ၁၅ ) နှစ် နဲ့ ( ၁၂ ) နှစ် အရွယ်ကောင်လေး တွေက သားမယား ပြုကျင့်
လှိုင်သာယာတွင် ၁ဝနှစ် အရွယ် ကောင်မလေးကို ( ၁၅ ) နှစ် နဲ့ ( ၁၂ ) နှစ် အရွယ်ကောင်လေး တွေက သားမယား ပြုကျင့် အမှုမှာ ၁၁. ၁၁. ၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၀၉၀၀ အချိန် ခန့်တွင် Continuous reading
မသမသူတစ်ယောက်လက်ချက်ကြောင့် ဦးနှောက်တစ်ခြမ်းပွင့်ထွက်ကာ ဘဝကိုအခက်ခဲဆုံးရှင်သန်နေရတဲ့အမျိုးသား
မသမသူတစ်ယောက်လက်ချက်ကြောင့် ဦးနှောက်တစ်ခြမ်းပွင့်ထွက်ကာ ဘဝကိုအခက်ခဲဆုံးရှင်သန်နေရတဲ့အမျိုးသား ရာဇဝတ်မှုတွေ ပေါများတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အန္တရာယ်ကို ဘယ်အချိန် ကျရောက်မလဲ သတိထား နေမှ တော်ကာ ကျမှာပါ ။ မဟုတ်ရင်တော့ ဘဝပျက်သွား နိုင်ပြီး အခန့် မသင့်ရင် အသက် ဆုံးရှုံးရဖို့ များပါတယ် ။ Continuous reading
This Year : 89088
Total Hits : 1239255